Guddoomiyaha maxkamada sare oo ka qeyliyey dhibaatooyinka heysata xarumaha garsoorka - Caasimada Online
Home Warar Guddoomiyaha maxkamada sare oo ka qeyliyey dhibaatooyinka heysata xarumaha garsoorka
Guddoomiyaha maxkamada sare oo ka qeyliyey dhibaatooyinka heysata xarumaha garsoorka
Muqdisho (Caasimada Online) – Ibraahim Iidle Suleymaan, Guddoomiyaha Maxkamada Sare ee dalka ayaa shaaca ka qaaday inaanu jirin Xarumo rasmi ah oo ay ku shaqeeyan Hay’adaha Garsoorka dalka.
Guddoomiyaha Maxkamada waxa uu sheegay in Xarumaha Hay’adaha Garsoorka ay yihiin kuwo dhamaantooda burbursan isla markaana aan weli dib loo dhisin.
Waxa uu tilmaamay in mas’uuliyiintii laga sugaayay inay ku shaqeeyan howlaha Garsoorka ay yihiin kuwo aan intooda badan laheyn xarumo ay u shaqo tagaan, loona baahan yahay in si dhaqsi leh wax looga qabto.
Guddoomiyaha ayaa cadeeyay in la dayacay dhammaan Xarumihii Hay’addaha Garsoorka dalka, isla markaana Dowladda aysan ahmiyad siin dib u dayactirka Xarumaha.
Awood la’aan jirta ayuu sheegay inay la dhisi la’ yihiin Xarumaha Hay’adda, waxa uuse dowlada Federaalka ugu baaqay in wax muuqda ay ka qabato.
Haddalka Guddoomiyaha Maxkamada Sare ee dalka ayaa imaanaya xili dhawaan Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo uu shaaciyay inay waxbadan ka bedeli doonaan howlaha Garsoorka.